အိမ်ရှင် အနိုင်နဲ့ စဖွင့်တဲ့ AFCON ၊ ရိုနယ်ဒိုလို မှတ်တမ်း ရတဲ့ ဇလာတန် ၊ ယူနိုက်တက်မှာ ဆက်နေချင်တဲ့ တိုက်စစ်မှူး တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
အိမ်ရှင် အနိုင်နဲ့ စဖွင့်တဲ့ AFCON ၊ ရိုနယ်ဒိုလို မှတ်တမ်း ရတဲ့ ဇလာတန် ၊ ယူနိုက်တက်မှာ ဆက်နေချင်တဲ့ တိုက်စစ်မှူး တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
ကင်မရွန်း နိုင်ငံက အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပတဲ့ ၂၀၂၁ အာဖရိက နိုင်ငံများ ဖလား ပြိုင်ပွဲ ကို ယမန်နေ့က စတင် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ ပါတယ် ။
ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား အပြီး စတင် ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲမှာတော့ အိမ်ရှင် ကင်မရွန်း ဟာ ဘူကီနာဖာဆို အသင်း ကို ၂-၁ နဲ့ အနိုင် ရရှိပြီး အဖွင့်လှ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒုတိယ ပွဲစဉ် မှာတော့ ကိပ် ဗာဒီ က အီသီယိုးပီးယား အသင်းကို ၁-၀ နဲ့ အနိုင် ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ရဲ့ ဆီနီဂေါ ဂိုးသမား အက်ဒွာ မန်ဒီ ဟာ ကိုဗစ် ပိုး တွေ့ရှိ ခဲ့တာကြောင့် ဇင်ဘာဘွေ အသင်းနဲ့ ကစားမယ့် အုပ်စု အဖွင့်ပွဲ ကို မပါဝင် နိုင်တော့ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
ဆီနီဂေါ အသင်းမှာ မန်ဒီ အပါအဝင် ကစားသမား ၈ ဦး အထိ ကိုဗစ် ပိုး တွေ့ရှိထားတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
FA Cup တတိယ အဆင့် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ စပါး ၊ ဝက်စ်ဟမ်း ၊ လီဗာပူး နဲ့ ဝုဗ် စတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းတွေ နိုင်ပွဲ ကိုယ်စီ နဲ့ နောက်တဆင့် တက်လှမ်း နိုင်ခဲ့ ကြပေမယ့် အာဆင်နယ် ကတော့ နော်တင်ဟမ် ဖောရက်စ် အသင်းကို ၁-၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့်ကာ ပြိုင်ပွဲ ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ ရပါတယ် ။
FA Cup စတုတ္ထဆင့် မဲခွဲမှု ကို ယမန်နေ့က ပြုလုပ် သွားခဲ့ပြီး လီဗာပူး က ကာဒစ် ၊ မန်စီးတီး က ဖူလ်ဟမ် ၊ ဝုဗ် က နောဝှစ်ချ် ၊ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး က ဘရိုက်တန် ၊ ချဲလ်ဆီး က ပလိုင်းမောက် အသင်းတွေကို အိမ်ကွင်းတွေမှာ ဧည့်ခံ ကစားရမှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
အီတလီ စီးရီးအေ ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ရိုးမား နဲ့ ယူဗင်တပ် တို့ရဲ့ ရောမမြို့က ပွဲဟာ အပြန်အလှန် သွင်းဂိုးတွေ ၊ အလှည့်အပြောင်းတွေ နဲ့ အကျိတ်အနယ် ရှိခဲ့ပြီး ယူဗင်တပ် က ၄-၃ နဲ့ အနိုင် ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အခြား ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ အင်တာမီလန် က လာဇီယို ကို ၂-၁ ၊ နာပိုလီ က ဆမ့်ဒိုးရီးယား ကို ၁-၀ ၊ အေစီမီလန် က ဗီနီဇီယာ ကို ၃-၀ တို့ နဲ့ အသီးသီး အနိုင် ရရှိ ခဲ့ကြပါတယ် ။
အေစီမီလန် အတွက် ဂိုးသွင်းယူ ပေးခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူးကြီး ဇလာတန် အီဘရာဟီမိုဗစ်ချ် ကတော့ သူ့ရဲ့ ဘ၀ မှာ မတူညီတဲ့ အသင်း ၈၀ ကို ဂိုးသွင်းယူ လိုက်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၂၁ ရာစု အတွင်းမှာ ဒီလို မှတ်တမ်းကို ဇလာတန် နဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို တို့သာ ရယူ ထားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် လီဂူး မှာတော့ PSG ဟာ လိုင်ယွန် အသင်းနဲ့ ၁ ဂိုးစီ သရေ ကျခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး ၅ ပွဲမှာ ၁ ပွဲသာ အနိုင် ရရှိ ထားနိုင်ခဲ့ ပေမယ့် အမှတ်ပေး ဇယား မှာတော့ ၁၁ မှတ် အထိ ဖြတ်ကာ ဆက်လက် ဦးဆောင် နေခဲ့ ပါတယ် ။
အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းတွေ မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး အီဒင်ဆင် ကာဗာနီ ဟာ ဇန်နဝါရီ မှာ အသင်းပြောင်းဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘဲ ယူနိုက်တက် မှာ ဆက်နေသွားလိုကြောင်း သူ့ကို ပြောပြ ခဲ့တယ်လို့ နည်းပြ ရန်းနစ် က ထုတ်ဖော် ပြောပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါဘီ အသင်းကို နည်းပြ နေတဲ့ ဝိန်းရွန်းနီ ကတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် လူငယ်လေး အာမက် ဒီရယ်လို ထရာအိုရေး ကို အငှား နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အက်စတွန် ဗီလာ ဟာ အဲဗာတန် ကနေ ထွက်ခွာချင်နေတဲ့ ဘယ် နောက်ခံလူ လူးကပ်စ် ဒင်း ကို ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ ပြိုင်ဘက်တွေထက် အလေးသာနေတယ် လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ကနေ ဗီလာ ကို အငှားနဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာမယ့် ဖိလစ်ပီ ကော်တင်ဟို ကတော့ မိသားစုလိုက် အင်္ဂလန် ကို ထွက်ခွာ လာခဲ့ပြီး ဒီအပတ် ထဲမှာ ဆေးစစ်မှု ပြုလုပ်ကာ အပြောင်းအရွှေ့ ကို တရားဝင် ကြေညာ သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ဟာ ကွင်းလယ်လူ အန်ဒွန်ဘီလီ အတွက် အငှား ( သို့ ) ဝယ်ယူ ဖို့ ကမ်းလှမ်း လာမှုတွေ ကို နားထောင်ဖို့ စိတ်ကူး ထားပြီလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် ကတော့ ကွင်းလယ်လူ ဝက်စတန် မက်ကိန်း အတွက် စပါး အသင်းရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ကို ပယ်ချ လိုက်ပြီး ကြေးတိုး ကမ်းလှမ်းဖို့ လိုလား နေတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
တိုက်စစ်မှူး ရှာဖွေ နေတဲ့ နယူးကာဆယ် ဟာ ဘန်လေ တိုက်စစ်မှူး ခရစ်စ် ဝုဒ် ကို ပြောင်းလဲ ချဉ်းကပ် လာတယ်လို့လည်း သတင်း ရရှိ ပါတယ် ။
ဘယ်နောက်ခံလူ လိုအပ်နေတဲ့ ချဲလ်ဆီး ဟာ အငှား ချထားတဲ့ အီတလီ နောက်ခံလူ အီမာဆင် ပယ်လ်မာရီ ကို ပြန်ခေါ်ဖို့ စဉ်းစား နေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ရဲ့ ပီဒရီ နဲ့ ဖာရန်တောရက်စ် တို့ဟာ ကိုဗစ်ပိုး ဆက်လက် တွေ့ရှိ နေသေးတာကြောင့် လာမယ့် ကြားရက် ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံမှာ ကစားမယ့် စူပါကိုပါ အက်စပန်ညာ ( စပိန် စူပါဖလား ) ပွဲကို လိုက်ပါ နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ၁၃ ရက်နေ့ မှာ ရီးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ စူပါကိုပါ အက်စပန်ညာ ဖလား ဆီမီး ဖိုင်နယ် ပွဲကို ကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး အနိုင် ရလာမယ့် အသင်းဟာ ဆီဗီးလား နဲ့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် တို့ ဆီမီး ဖိုင်နယ် က အနိုင်ရလာမယ့် အသင်းနဲ့ ဗိုလ်လု ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
လက်စတာ စီးတီး နဲ့ အဲဗာတန် တို့ ရဲ့ ပြန်ကစားဖို့ စီစဉ် ထားတဲ့ ရွှေ့ဆိုင်း ပွဲစဉ်ဟာ လက်စတာ ဘက်မှာ ကိုဗစ် + အာဖရိက ပြိုင်ပွဲ ကစားသူတွေ ကြောင့် ကစားသမား လုံလောက်မှု မရှီတဲ့ အတွက် ထပ်မံ ရွှေ့ဆိုင်း လိုက်ပြန်ပြီ လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Previous Article လိဂ်ဝမ်း ကလပ် မော်ကမ်ဘီကို နောက်က လိုက်ကစားပြီး အနိုင်ရခဲ့တဲ့ အက်ဖ်အေဖလားပွဲမှ တော့တင်ဟမ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပေါ်တင် ဝန်ခံသွားတဲ့ ကွန်တီ
Next Article အက်ဖ်အေဖလား ရှုံးပွဲက တာဗာရက်စ် ရဲ့အပြုအမူကို မှတ်ချက်ပေးရင်း အာဆင်နယ် ကစားသမားတွေကို တောင်းဆိုမှု လုပ်လိုက်တဲ့ အာတီတာ